Musangano Wepagore wa2013—Kuungana kweZvapupu Kukuru Kupfuura Kumwe Kwose
MUSI weSaturday 5 October 2013, vanhu 257 294 munyika 21 vakapinda musangano wepagore wechi129 weWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vamwe vaiva paiitirwa musangano wacho, asi vamwe vaiona vhidhiyo yezvaitoitika vari kune dzimwe nzvimbo kuburikidza nekutepfenyura kwepaIndaneti. Munguva pfupi yakatevera zvimwe Zvapupu zvakazoonawo vhidhiyo yepurogiramu yacho yainge yarekodhwa. Vose vakapinda vaiva 1 413 676 munyika 31 zvichiita kuti uku kuve kuungana kweZvapupu zvaJehovha kukuru kupfuura kwese kwakamboitwa.
Kubva kumakore ekuma1920, Zvapupu zvaJehovha zvagara zvichitepfenyura magungano kuvateereri vanenge vari munyika dzakasiyana-siyana, zvichishandisa nhare pamwe chete nezviteshi zveredhiyo. Iye zvino Indaneti inokwanisa kuita kuti kunyange vanhu vari munzvimbo dziri kure vanzwe uye vaone zviitiko panguva yazvinenge zvichitoitika kana kuti zvichangobva kuitika.
Nhengo dzemapazi akati kuti dzakashanda kwenguva inopfuura gore kuti dzigadzirire nhepfenyuro yacho. Pamazuva ayaishandiswa, vanamazvikokota vaiva kuBrooklyn, New York ndivo vaiona nezvekushanda kwayo, uye nguva dzose pairamba paine munhu ari pabasa sezvo yairatidzwa vanhu vari munzvimbo dzine nguva 15 dzakasiyana-siyana.
Nzvimbo Dzainge Dzakaungana Vanhu
Kwawakaitirwa: Imba yeMagungano yeZvapupu zvaJehovha yemuJersey City, kuNew Jersey, U.S.A. Vakapinda: 4 732
Kwaiva nevakawanda kupfuura kumwe kwose: Perth, kuAustralia Vakapinda: 7 186
Kuchamhembe: Fairbanks, kuAlaska, U.S.A. Vakapinda: 255
Kumaodzanyemba: Invercargill, kuNew Zealand Vakapinda: 190
Kure zvakanyanya: Perth, kuAustralia, makiromita anenge 18 700 kubva kuJersey City
Mashandiro Anoita Nhepfenyuro yepaIndaneti
Makamera akati kuti anenge achitora vhidhiyo yepurogiramu yacho.
Mavhidhiyo acho anotumirwa kuswitcher, pozosarudzwa yakanakisisa.
Vhidhiyo inenge yasarudzwa inobva yatumirwa kukombiyuta inenge iri mucontrol center.
Mavhidhiyo emhando dzakasiyana siyana ezviri kutoitika papurogiramu yacho anogadzirwa.
Mavhidhiyo acho anoiswa muzvikamu zvemasekonzi 10.
Zvikamu zvacho zvinogona kuwanika paIndaneti kuburikidza nenetiweki yemaWeb servers.
Mudziyo unenge uchishandiswa panzvimbo imwe neimwe inenge yakaungana vanhu unodhaunirodha zvikamu zvacho kubva paWeb server wozviisa kwenguva pfupi pane imwe nzvimbo kana kuti mubuffer. Mudziyo wacho unobva wabatanidza zvikamu zvinenge zvadhaunirodhwa kuti zvive vhidhiyo inonyatsooneka zvakanaka.
Vateereri vanoona uye vanonzwa purogiramu yacho.